အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယခရီးသွားအထုပ်များအဘို့သင့်ကိုလမ်းပြ | + 91-993.702.7574 အပေါ် Call
အရှေ့မြောက်ဘက်၏အနည်းဆုံးစူးစမ်း, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မြေယာ unarguably သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ဆန်းကြယ်မှုများနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ် unexplored တစ်ဦးသည်မိုဃ်းကောင်းကင်သည်! သင်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းရန်အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယခရီးသွားအထုပ်များအထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
အဆိုပါမပါသောတောင်ပေါ်မှာဖုံးကွယ်နှင့်ဟိမဝန္တာ၏ချိုင့်ကိုပြောင်းရွှေ့, မြောက်အရှေ့အိန္ဒိယစုံစမ်းစစ်ဆေးနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး, otherworldly နှင့်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အစက်အပြောက်အိန္ဒိယအကြားတစ်ဦး standout ။ ထိုလူမြိုး၏ဤအပိုင်းအစရေတွင်းလူသိများ '' ခုနစ်ညီအစ်မ '' Arunachal Pradesh ပြည်နယ်, အာသံ, Meghalaya, မဏိပူရ, မီဇိုရမ်, နာဂများနှင့် Tripura မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အထက်အရှေ့၏နောက်ထပ် unexplored ဘုနျးဖြစ်ပါသည် ဆစ်ကင်း။ အံ့ဖှယျ Gangtok အားလုံးတစ်နှစ်ဝန်းကျင်ခရီးသွားများအတွက်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာဆွဲယူခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကသင်၏အသက်တာတွင်မည်သည့်နှုန်းခဲ့ကြကြောင်းလည်းလိုအပ်ချက်အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။
မြေကွက်တစ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းပိုင်းမှတဆင့်အိန္ဒိယအရာကြွင်းလေချိတ်ဆက်ထားပြီး, ဒီဝေးလံခေါင်ဖျားသေး arrestingly လှပသောတောင်တန်းရှုခင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအစာရှောင်အိန္ဒိယ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဖြစ်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များတက်ဖမ်းနေကြပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအများနှင့်ပထဝီအနေအထားအရ, မြောက်အရှေ့အိန္ဒိယတိုင်းပြည်၏ကျန်ကနေကွဲပြားသည်နှင့်အတူတူပင်တိုင်းပြည်များ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထဲမှာထငျရှားပါသညျ။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သှေးဆောငျလက်မှုပညာမမေ့နိုင်သောအမှတ်တရများအားဖြင့်သင်တို့ကိုချန်ထားမည်နေထိုင်အပြာရောင်တောင်တန်း, အသက်ရှု-ယူပြီးစိမ်းလန်းသော, သိပ်သည်းသစ်တောများ, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရတနာသိုက်၏နွေးထွေးမှု။
သင့်ပတ်လည်ကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နိုငျသောအရပ်တို့ကိုတချို့ရှိနေပါတယ် Darjeeling, Kalimpong, Gangtok, Lachung, Kanchenjunga Peak, Yumthang ချိုင့်, Shillong, Pelling, Cherrapunjee, Kaziranga အမျိုးသားဥယျာဉ်, ဂိုဟားသီး Guwahati စသည်တို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရှေ့မြောက်အိန္ဒိယခရီးသွားအထုပ်များအချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်အညီသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်!
လူမျိုးစု Arunachal Pradesh ပြည်နယ်